Ny mpitantana tenimiafina Dropbox dia ho afaka manomboka amin'ny volana aprily | Avy amin'ny mac aho
Maimaimpoana ny mpitantana tenimiafina Dropbox manomboka amin'ny volana aprily
Raha momba ny fitantanana ny teny miafinay amin'ny Mac dia manana vahaolana be dia be isika karama daholo, afa-tsy ny lakilen'ny Apple key, na dia voafetra amin'ny tenimiafin'ny pejin-tranonkala ihany aza izany satria tsy mamela antsika hitahiry karazana fampahalalana hafa.
Tamin'ny volana lasa, LastPass dia nanambara izany ny serivisinao maimaim-poana dia voafetra amin'ny fitaovana iray ihanyNoho izany, raha te hanohy hampiasa azy io dia ilaina, eny na eny, ny fampiasana ny iray amin'ireo famandrihana samihafa atolotray antsika. Omaly, ny daty nanombohana nandoa ny LastPass, dia nanambara izany i Dropbox lasa afaka ny mpitantana ny teny miafiny.
Dropox dia iray amin'ireo serivisy fitahirizana rahona voalohany nanjary nalaza nanerana ny tontolo iainana rehetra. Na izany aza, rehefa nandefa ny vahaolana fitahirizany rahona i Google, Apple, ary Microsoft, very mpanjifa ny orinasa.
Lavitra ny fiampitana ny sandriny, ny orinasa dia nandefa vahaolana samihafa tazomy ny mpanjifanao ary misarika vaovao. Nanangana mpitantana tenimiafina ny orinasa tamin'ny taon-dasa, mpitantana izay tsy zakan'ny mpanjifa mandoa ihany, fa hatramin'ny volana aprily dia ho maimaim-poana ho an'ny rehetra izany.
Maimaimpoana, nanomboka teo hamela anao hitahiry tenimiafina hatramin'ny 50 fotsiny. Raha mihoatra io isa io ianao dia tsy maintsy misafidy ny iray amin'ireo drafitra fandoavam-bola samihafa atolotry ny orinasa. Ireo mpampiasa Dropbox rehetra dia ho afaka mampiasa ny mpitantana ny tenimiafinao miaraka amin'ny syncing mandeha ho azy hatrany amin'ny fitaovana 3.
Ny mpitantana tenimiafina Dropbox dia tena mitovy amin'ny vahaolana natolotry ny 1Password sy LastPass, Ka raha mieritreritra ny hamindra ny tenimiafinao mankany amin'ny sehatra hafa ianao dia tsy hampivadi-po ny fiovana.
Misy ny tsaho milaza fa mety hiasa amin'ny dikanteny Apple fiasa vaovao ho an'ny fampiharana Keychain, serivisy izay efa misy amin'ny endrika fanitarana ho an'ny Google Chrome sy Microsoft Edge amin'ny Windows.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Maimaimpoana ny mpitantana tenimiafina Dropbox manomboka amin'ny volana aprily
Ring Alarm 2 sy Ring Alarm Outdoor Siren ary Sleek no nampiditra
Foxconn dia afaka manao fiara elektrika any Etazonia amin'ny 2023. Hiditra ao amin'ny Apple Car ve izy io?